स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन ? « Phidim Today
स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन ?
Published on: 27 February, 2019 2:23 am
उच्च शिक्षा अध्यापन हुने कलेजमा गठन हुने स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन राजनीतिक बगैंचा हो । त्यहाँबाट उमारिएका बिरुवाले भोलि देशको राजनीति थाम्नु पर्ने हुन्छ । तिनै बिद्यार्थीहरु मध्येका केहीलाई स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन भनेर पत्रकार युबेन जवेगूले गरेको कुराकानी ।
देशका राजनैतिक परिवर्तनमा बिद्यार्थीको सवल संलग्नता छ । युवा समृद्ध देशका आधार स्तम्भ भए जस्तै विद्यार्थीहरु पनि राजनैतीको आधार स्तम्भ बनेका छन् । शिक्षा र युवा दुवैलाई समेटेर हुने गतिबिधीले धेरैको ध्यान तान्दछ । स्वबीयु चुनाव यस्तै एउटा मोड हो । विद्यार्थीकोे सरकार भनेर विश्वव्यपी मान्यता स्थापित गरेको यस्तो चुनाव शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथितीहरुलाई सम्बोधन गदै विद्यार्थीको हक, हित प्रत्यभुती गर्नको खातिर आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरुले नै प्रतिनिधी छान्ने र संगठनको निर्माण गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरुको हक, हित र आवाज क्याम्पस प्रशासन सँग समन्वयत्मक कार्य गर्नका लागी स्वबियुले सहयोग गर्ने हुँदा आवश्यक छ ।
पाँचथर बहुमुखी क्याम्परमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता, व्यावस्थापन, छात्रा बृति लगायतका समस्या हटाउन र बिगत १५ वर्ष अगाडी देखि व्यावस्थापन समिती एकलौटी शासन प्रणाली चलिरहेको देखिएको छ । यस्लाई हटाउनको लागी आवश्यक छ ।
क्याम्पस भित्र रहेको बिकृती, बिसंगती, मनपरितन्त्र र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा आवाज उठाउदै बिद्यार्थी र सञ्चालक समितीलाई जोड्दै शैक्षिक गुणस्तरलाई माथी उकास्नको लागी पनि निर्वाचन हुन आवश्यक छ ।
विद्यार्थीको हक हितको निमित यो साझा मञ्च हो । विद्यार्थीको हक हितका लागी मात्र नभएर एउटा क्याम्पस प्रशासन, गुणस्तरिय शिक्षा लगायत हरेक कुरामा स्वबियु आवस्यक छ । त्यो बिगत देखीकै आवाज हो ।
पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा मात्र नभएर हरेक कलेजमा स्वबियू निर्मण हुन आवस्यक छ । पँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समयबाट त्यसको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । स्वबियू नबन्दा सम्म बिद्यार्थी हितका हरेक कुरा पछि परेको अवस्था छ । विद्यार्थी घट्दो छ, पठ्नपाठ्नमा समस्या भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर नभएको कारणले गर्दा स्थानीय विद्यार्थी अन्य जिल्ला पढ्न गएको अवस्था छ । यी समस्या हटाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन बन्न जरुरी छ ।
भारतलाई काउन्टर दिन नेपालले पनि आफ्नो नयाँ नक्सा बनाउँदै